🥇Ezona zibonakaliso zesitokhwe zikaJanuwari 2022: Funda kwaye uRhwebe njengePRO!
Ezona mpawu zeStock zaBasaqalayo 2021
Ngamanye amaxesha kubhekiswa kuwo 'njengokubangela isenzo', imiqondiso yesitokhwe inikezela ngeengcebiso eziluncedo kumathuba orhwebo anokuba yinzuzo. Ngamanye amagama, uya kuxelelwa ukuba yeyiphi iodolo ekufuneka uyibeke kurhwebo- olusekwe kubunzulu bobuchwephesha okanye uhlalutyo olusisiseko olwenziwe ngumnikezeli womqondiso.
Ukukhangela olona phawu lwesitokhwe lwabaqalayo? Ukuba kunjalo, thina kwi-Learn 2 Trade sinayo yonke into oyifunayo.
Kwesi sikhokelo, sithetha nge-ins kunye nokuphuma kweziphi iimpawu zesitokhwe, ukuba zinokukunceda njani ukuba urhwebe ngendlela ekufutshane, kunye nento ekufuneka uyenzile ukuze uqalise namhlanje!
Funda iiMpawu ezi-2 zoRhwebo
Fumana imiqondiso emi-3 yesitokhwe ngeveki nganye
Yonke imiqondiso inongeniso kunye nemiyalelo yokuPhuma
Zuza kwiiNgcali zethu zeNtengiso yeNdlu
Nje i- $ 15 ngeNyanga ngesiQinisekiso seNtsuku ezingama-30 sokubuyiselwa imali
Ezona mpawu zeStock zaBasaqalayo
Masithi ujonge ukufikelela kutshintshiselwano olukhulu lwesitokhwe, njenge-NYSE kunye ne-NASDAQ ukuthengisa izabelo ezinje ngeDisney, iAmazon, iTesla, iFacebook, kunye nezinye iinkampani ze-blue-chip. Njengoko usazi - kunyanzelekile ukuba uqale ufunde uhlalutyo olusisiseko kunye nobugcisa.
Zombini ezi ndlela zokucwangcisa zinokuthatha iminyaka ukuba zifundwe kwaye zihlala kubandakanya ukufunda ngedatha yezemali, iitshathi zembali nezangoku zexabiso, kunye nezalathi ezininzi. Ezo zikhombisi zibandakanya i-Index ye-Relative Strength Index, i-Index ye-Directional Index, i-On-Balance-Volume, iStochastic Oscillator, i-MACD, kunye nokunye.
Ngelixa uninzi lwabantwana abasandula kuzalwa bezama ukutsiba olu phando sele lukhankanyiwe ngaphambili, bahlala befumanisa ukuba yindlela ekhawulezayo yokuqhushumisa uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa ngaphandle kokufumana. Kungenxa yokuba, ngaphandle kwezixhobo, abarhwebi abakwazi kuchonga imeko yamaxabiso kunye namathuba anokubanenzuzo. Ngokwenyani uthengisa ungaboni. Ngaphandle kokuba usebenzisa ezona mpawu zibalulekileyo zabasaqalayo!
Apha ekuFundeni urhwebo 2, sifuna ukunceda abathengisi ukuba benze iingeniso ezingaguquguqukiyo kwaye bafikelele kwinqanaba eliphezulu. Kananjalo, imiqondiso yethu yorhwebo lwesitokhwe iya kwenza ukuba urhwebe ngendlela enobungozi nengazi nto.
Njengoko sixoxa kwesi sikhokelo kweyona miqondiso mihle yesitokhwe sabaqalayo, iingcebiso zethu zikuhambisa kwinkqubo yorhwebo lwesitokhwe. Ukuya kwinqanaba apho kunganyanzelekanga ukuba wenze naluphi na uhlalutyo konke konke. Funda 2 Iimpawu zorhwebo azigcinelwanga nje kwabasaqalayo, nanjengokuba nabatyali zimali abaxakekileyo bezakuxhamla kule ndlela yokonga ixesha kurhwebo.
Zisebenza njani iiMpawu zeStock
Nabani na owela kudidi lwe 'stock signer novice', masichaze ukuba basebenza njani. Ngamafutshane, imiqondiso yesitokhwe inokuthelekiswa neengcebiso okanye iingcebiso ngokuthengisa.
Umzekelo, emva kokujoyina iQela lokuFunda leQela loRhwebo lokuFunda 2, uya kuqala ukufumana imiqondiso emi-3 ngeveki. Umqondiso ngamnye uya kuba nolwazi olubalulekileyo ngokweengcebiso zodolo lwenzuzo-olufunyanwa kuhlalutyo olunzulu lweemarike zesitokhwe. Kananjalo, awunakukhathazeka malunga nokulahleka kwamathuba okuthengisa esitokhwe kwakhona.
Ngokubalulekileyo, ukwazigcinela nobunzima bokwenza iiyure ngeeyure zohlalutyo lobuchwephesha olufunekayo ukulinganisa uluvo lweemarike.
Ukukunika umbono ocacileyo, jonga kulwakhiwo lomzekelo wesitokhwe sokurhweba ngomzekelo ongezantsi:
Mde okanye Mfutshane: Long
Ixabiso leMida: $205.00
Ukuphulukana nokupheliswa: $203.00
Thatha Inzuzo: $214.00
Eyona miqondiso ilungileyo yesitokhwe iya kuba nayo yonke le ngcaciso ingentla. Njengoko ubona, oku kubandakanya igama lesitokhwe nokuba kuyacetyiswa ukuba uhambe ixesha elide okanye elifutshane.
Imiqondiso yethu isekwe kuphela kuhlalutyo, ke ukuba umqondiso wesitokhwe ucebisa ngokuhamba ixesha elide kwiDisney, kungenxa yokuba emva kophando oluninzi- abathengisi bethu abangaphakathi ezindlini banokubona ukunyuka kwexabiso. Kwangokunjalo, ukuba umqondiso uphakamisa ukuba mfutshane, kungenxa yokuba zonke iinkcukacha zedatha zibhekisa ekuhleni kwexabiso.
Zeziphi ezona mpawu ziBalaseleyo zeSitokhwe ezibandakanya
Kwicandelo malunga nokuba sikunike isishwankathelo sokuba ujongeka njani umqondiso wesitokhwe soRhwebo 2. Nangona oku kwanele ngokwaneleyo ukuba ubeke iiodolo zethu ezicetyisiweyo kumthengisi okhethiweyo wesitokhwe, kungcono ukuba ube nokuqonda ukuba zithetha ukuthini.
Ngale nto engqondweni, apha ngezantsi sixoxa ngamanqaku eedatha nganye oza kuthi uhlangane nawo xa ufumana uphawu lweStock 2 yorhwebo.
Into yokuqala oza kuyibona kumqondiso wakho wesitokhwe ligama lenkampani esibona ukuba linethuba lokurhweba. Izitokhwe bezithengiswa ngenkuthalo kwilizwe jikelele kangangamakhulu eminyaka, kwaye ke kukho iimfumba zeemarike ezohlukeneyo ezivavanywa ngabahlalutyi bethu.
Iimpawu zethu zesitokhwe zihlala zibandakanya iinkampani ezivela kolunye lotshintshiselwano olukhulu emhlabeni. Umzekelo, abahlalutyi bethu bahlala bejolise kwizitokhwe ezidweliswe kwiindawo zentengiso zase-US nase-UK ezinje nge-NYSE, NASDAQ, kunye neLondon Stock Exchange.
Le yokugqibela iquka iinkampani ezinjengeLloyds Banking Group, iVodafone, iTesco, iNatwest, iRoll Royce Holdings, nezinye ezininzi. Kwi-NYSE, ezinye zezona ndawo zisebenzayo abathengisi bethu abangaphakathi endlwini bagxila kuzo kubandakanya iDisney, iFord Motors, kunye noJohnson & Johnson.
Iimpawu zethu zesitokhwe seNASDAQ zihlala zibandakanya iTesla, iAmazon, iMicrosoft, iPayPal, iAlfabhethi kunye nokunye. Njengoko uyazi, ukutshintshiselana kwesitokhwe kuhlala kubandakanya uluhlu lodweliso. Ukuba kunjalo, isimboli yethu yesitokhwe iya kukuxelela ukuba loluphi utshintsho onokujolisa kulo. Ukuba awuqinisekanga-cela nje uncedo komnye wabameli beenkonzo zethu!
Kumzekelo wethu ngaphambili, besikhankanyile ukuba umqondiso ngamnye wesitokhwe uya kubandakanya isindululo ngokuhamba 'ixesha elide' okanye 'elifutshane'.
Ukuba sikholelwa ukuba isitokhwe siya kuthi kuvuka Ngexabiso-umqondiso wethu uya kukuxelela hamba ixesha elide
Kwelinye icala, ukuba siyakholelwa ukuba isitokhwe siya kuba bawe Ngexabiso - umqondiso wethu uya kukuxelela hamba mfutshane
Ukuba uphawu lwesitokhwe sokuFunda 2 sicebisa elide -Yila kuthenga Uku-odola kumthengisi wesitokhwe osikhethile
Ngelixa, ukuba uphawu lwe-2 lokuthengisa isitokhwe lubonisa mfutshane -Yila thengisa Uku-odola kumthengisi wesitokhwe
Eyona nto kugxilwe kuyo apha kukwenza ukuba amava okurhweba esitokhwe kuye wonke umntu abe nenzuzo-kunye nawe kufuneka wenze umsebenzi omncinci ngangokunokwenzeka.
Ngaphandle kokuthetha ukuba asinabudlelane nasiphi na isitokhwe esenza uhlalutyo kuso. Eyona nto kugxilwe kuyo kukuba abahlalutyi bethu abaziingcali benze yonke into eyenziwa ngumlenze -ukuze kunganyanzelekanga ukuba uyenze.
Ezona mpawu zibalaseleyo zesitokhwe zibonisa amaxabiso 'oku-odolwa komda' kwindawo nganye enokubakho. Kwabo abangaziyo, ungangena kwimarike yesitokhwe ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo.
Indlela yokuqala kukudlula 'kwi-odolo yentengiso'. Lo myalelo uya kuhlala ukhethwa ngokuzenzekelayo kwiqonga lakho olikhethileyo lokuthengisa. Oku kuxelela umthengisi wakho kwi-Intanethi ukuba uyalithanda ixabiso langoku lesitokhwe kwaye ufuna ukuba iodolo yakho yenziwe kwangoko- kwixabiso elikufutshane lentengiso.
Abathengisi bexesha elifutshane bathanda ukuthanda umda. Yeyiphi, kwabo bangaziyo, eyenza ukuba ungene kwimarike ngexabiso elithile. Kananjalo, iingcali zethu zenza uphando olubanzi ukunciphisa umngcipheko wobungozi obunxulunyaniswa neenzame zakho zorhwebo.
Makhe sijonge umzekelo:
Sithengisa isitokhwe seTesla, esinexabiso le- $ 677.00
Masithi iqela lethu lifikelela kwisigqibo sokuba ukuba uTesla unyukele kwi- $ 682.00- kububulumko hamba ixesha elide
Kananjalo, i-odolo yomda we- $ 682.00 ityikityiwe
Umyalelo uya kwenziwa ngokuzenzekelayo nje ukuba eli xabiso libethe. Ke ngoko, iodolo iya kuhlala ilindile de iTesla ibethe i $ 682.00, okanye sixelele ukuba urhoxise iodolo ngesandla.
Uninzi lweempawu zethu zesitokhwe ziya kubandakanya umda wexabiso loku-odola ngaphandle kokuba kunjalo, ithuba lifuna i-odolo yentengiso-kwaye ke ngoko-ukwenziwa kwangoko.
Sithethile ngokungena kwakho kwintengiso ngokubanzi-kwaye sakhankanya ukuba eyona miqondiso yesitokhwe iya kubandakanya ukuthenga / ukuthengisa kunye nokunciphisa umda kwiingcebiso. Kubaluleke kakhulu ukuba nesicwangciso sokuphuma endaweni.
Ngale nto engqondweni, ngoku lixesha lokuba uthethe malunga nomngcipheko wokuyeka umngcipheko kurhwebo lomqondiso wesitokhwe. Ekupheleni kosuku, eyona njongo iphambili kukugqwesa kwintengiso yesitokhwe- kunjalo ebomini, akukho ziqinisekiso. Nangona kunjalo, i-odolo yokumisa ilahleko iya kumisa ilahleko ngokoqobo.
Ukuqhubeka nokucacisa, nantoni na enokwenzeka kwibala lezorhwebo kwi-Intanethi. Inqaku lelokuba ngomyalelo wokulahleka kokumiswa endaweni, uyakwazi ukugcina ulawulo malunga nokuba uzuza okanye ulahlekelwe kangakanani-ngaphambi kokuba isikhundla sakho sivalwe ngokuzenzekelayo liqonga lokurhweba olikhethileyo.
Kumzekelo wethu wangaphambili wesignali yesitokhwe, sithe kufuneka uhambe ixesha elide kwiDisney nge- $ 205.00, kunye nelahleko yokumisa kwi-203.00 yeedola. Oku kubonisa ukuba ngokulandela ingcebiso yethu - akukho ngaphezulu kwe-1% eya kulahleka kolu rhwebo. Ngokukhawuleza xa isitokhwe siwela kwi- $ 203.00- umthengisi uya kusivala ngokuzenzekelayo isikhundla sakho.
Omnye umyalelo obalulekileyo esihlala siquka kuwo wonke umqondiso wesitokhwe yinzuzo yokuthatha. Njengoko besitshilo, oku kutshixa kwiingeniso zakho ngokuzenzekelayo. Kumzekelo wangaphambili, sibeka isindululo sexabiso sokwenza inzuzo kwiDisney kwi- $ 214.00 - 4% ngaphezulu kwexabiso loku-odola umda.
Oku kuthetha ukuba ukuba ulandele lo mqondiso kwileta, uya kuzuza nge-4% - ukuba urhwebo lwesitokhwe luhamba ngendlela yethu. Ukubeka ngokulula, ukuba eli xabiso lexabiso lifikelelwe-urhwebo lwakho luya kuvalwa ngokuzenzekelayo-yiyo loo nto utshixa inzuzo yakho kwi-4%. Ngokubalulekayo, oku ngaphandle kokuba ube nexesha lokuthengisa iimarike.
Izitokhwe SIgnals - Risk Vs Umvuzo
Apha ekuFundeni u-2 woRhwebo, iqela lethu elingaphakathi labahlalutyi abaziingcali lihlala likhumbula umngcipheko vs umvuzo nakoluphi na urhwebo xa usabelana ngeempawu zesitokhwe. Kumzekelo wethu wangaphambili, umyinge womvuzo-1: 4 usetyenzisiwe. Kananjalo, sijonge ukubeka umngcipheko kwi-1% yesiteki sethu sokuqala ukuze senze i-4%.
Ngenxa yoko, isindululo sethu sokulahleka kokulahleka yayiyi-1%, kwaye inzuzo-yokuthatha yayiyi-4%. Sihlala sisebenzisa i-1: umngcipheko we-3 / umyinge womvuzo kwiimpawu zethu zesitokhwe- oko kuthetha ukuba intengiso e-1 kwezi-3 iyaphumelela-sisendleleni.
Eyona nto ibalulekileyo kwiSitokhwe seMpawu zeTelegram
Eyona miqondiso mihle yesitokhwe ithunyelwa ngeFund 2 yoRhwebo simahla isibonakaliso se-forex yocingo iqela. Ngaphandle kwegama, uya kufumana imiqondiso yasimahla esitokisini kunye nazo zonke iintlobo zeeasethi ezithengiswayo ngaphaya kwe-forex.
Bona izizathu zokuba kutheni sinikezela ngeyona miqondiso mihle ilapha ngezantsi:
Inokuthenjwa kwaye ikhuselekile: Ngaphezulu kwezigidi ezingama-500 zabantu abasebenzisa iTelegram. Imiyalezo ibhalwe ngokufihlakeleyo kwimfihlo, kwaye inkonzo ayifuni nayiphi na idatha-nokuba isebenza ngonxibelelwano olungaphantsi kwe-intanethi
Ixesha elilungile: Imiyalezo esekwe kwilifu ithunyelwa ngexesha langempela kubo bonke abasebenzisi, okuthetha ukuba awusoze waphoswa ngumqondiso wesitokhwe soRhwebo 2!
Inkonzo yasimahla: Inkonzo yeTelegram ayihlawulelwa, ngoko konke okufuneka ukwenze kukukhuphela i-app, qhagamshela kwi-intanethi kwaye ulungile ukuhamba
Incoko yeqela: Amalungu ethu e-2 yesitokhwe samalungu esitokhwe ayakwazi ukuncokola kwaye abelane ngezimvo ngemithombo yeendaba, imiyalezo kunye nezitikha. Oku kudala imeko yokudibana kunye noluntu
Imifanekiso efundisayo: Apha ekuFundeni ukuRhweba oku-2 sithanda ukubuyisela umva iimpawu zethu zesitokhwe ngobungqina obunzima- oko kuthetha ukuba sihlala sabelana ngegrafu okanye iitshathi kunye neqela lethu lamalungu eTelegram.
I-Telegraph iyakhawuleza ibe yindlela yokubonelela ngeyona miqondiso mihle yesitokhwe. Kukho izizathu ezahlukeneyo njengoko zidwelisiwe apha ngasentla. I-Telegraph ilunge kakhulu kwaye yabucala nayo. Xa ungena kwi-Learn 2 Trade stock sign group, ujoyina uluntu olunentengiselwano- apho sonke sinomnqweno wokuhamba phambili kwiimarike zesitokhwe kwaye sizuze ngokungaguquguqukiyo!
Inkonzo ilula kakhulu ukwenza ngokwezifiso, njengoko uya kuba nakho ukuseta eyakho ithoni yesaziso esithile ukuze wazi ukuba unesifundo se-2 yesitokhwe esithengiswayo. Nokuba ungumntu okhetha ukuba ifowuni yakhe ithi cwaka imini yonke, ungayiseta ukuze usetyenziso lukwazise ngemiyalezo yeTelegram nokuba yeyiphi na.
Esona siCwangciso seMpawu zeZabelo
Apha kuFunda uRhwebo 2, senza uphando olunamandla nolunzulu kwiimarike zesitokhwe. Olu phando lujolise kuhlalutyo lobuchwephesha, olubandakanya ukuzoba itshathi, izixhobo zesalathiso esiphambili, kunye neemfumba zophando olunzulu kwidatha yezemali yeenkampani ezisemva kwesitokhwe.
Iiyure ezingapheliyo zichithwa emfihlakalweni ukubonelela ngamalungu ethu ngesicwangciso sesitokhwe esipheleleyo- kuba sikholelwa kumgangatho ngaphezulu kobungakanani. Kananjalo, endaweni yokukugcwalisa ngemiqondiso emininzi ngemini- sithumela iingcebiso ezi-3 ngeveki -ukuya kufunda iqela leTelegram yoRhwebo.
Ukuba unexhala lokuba emva kweveki okanye ezimbini ungangoneliseki yinkonzo yomqondiso wesitokhwe- oku akuyi kuba yingxaki. Siqinisekile kumgangatho wenkonzo yethu yesiginali ukuba sinika onke amalungu isiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-30. Oku kuthetha ukuba ukuba uthatha isigqibo sokuba ufuna ukuyeka kwiintsuku ezingama-30, unokuqhagamshelana neqela lethu lenkxaso yabathengi ukucela ukubuyiselwa imali.
Ukuzama ezona nkonzo zibonakalisa iimpawu zesitokhwe ukuya kuthi ga ubunakho kufuneka:
Intloko kwi-stock broker kwi-Intanethi eneakhawunti yedemo. kwaye ubhalise. Sikala i-eToro-njengoko umrhwebi engenakhomishini, esebenza ngaphezulu kwabaxhasi abazizigidi ezili-17, kwaye unikezela ngeakhawunti yasimahla yedemo ene- $ 100,000 kwimali yephepha
Xa ufumana uphawu lwesitokhwe sokuFunda 2 ngeTelegram-landela iodolo kwileta ngeakhawunti yeedemo yeToro
Xa uvale isikhundla sakho-qaphela ukuzuza / ilahleko
Landela imiqondiso, urhwebe, kwaye uphinde-iiveki ezimbalwa ubuncinci
Kwiiveki ezimbalwa ezantsi emgceni, ungabala nayiphi na inzuzo kunye nokuzuza ukuze ubone ukuba imiqondiso yethu iphumelele kangakanani
Njengoko kucacile ngentla- ngokuvavanya esona sitishi sisevisi sisebenzisa iakhawunti yedemo yasimahla, unokuziva ukuba isebenza njani, kunye nombono wokuba uyayifanela na indlela othengisa ngayo.
Ukuthathela ingqalelo into yokuba sinikezela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-30, awunanto unokuphulukana nayo ngokuqala kwenkqubo ngokusebenzisa indawo yeakhawunti yedemo.
Amaxabiso eSign Stock
Apha kwi-Learn 2 Trade, siyazingca ngokungafihlisi. Kananjalo, akukho sakhiwo sikhulu semali xa kufikwa kwiimpawu zesitokhwe.
Thenga nje i- $ 15 ngenyanga kwaye siya kukuthumela imiqondiso emi-3 yesitokhwe veki nganye-sichaza amathuba anokufumana inzuzo ngokungena kunye nokuphuma kwamaxabiso. Njengoko besitshilo, oku kuza kunye nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-30.
Ukukhetha uMrhwebi ngeyona Miboniso mihle yeSitokhwe
Ukukhetha umthengisi kweyona miqondiso ilungileyo yesitokhwe akufuneki kuthathwe kancinci. Kananjalo, jonga ngezantsi koluhlu lweemetrikhi eziphambili ekufuneka uziqwalasele.
Ummiselo uphezulu apho xa kufikwa ekukhetheni i-broker kweyona miqondiso mihle yesitokhwe. Ngaphandle kommiselo, uzishiya usemngciphekweni wababoneleli abanomthunzi. Ungayichazanga eyokuba unikezela ngemali kwiinkampani ezingabekwanga tyala ngezenzo zazo.
Iqonga lokuthengisa ngesitokhwe i-eToro ilawulwa ngabona baphathi bahlonitshwayo bezezimali kwihlabathi-kubandakanya i-FCA (UK), ASIC, (Australia), kunye neCySEC (eCyprus). Kulabo abangaziyo, amaqonga ezorhwebo asezantsi alawulwayo kufuneka ahambisane nemithetho engqongqo xa kufikwa kumba wokwahlulwa kwengxowa mali yomthengi, ukungafihlisi umrhumo, iKYC, kunye nophicotho oluneenkcukacha. Kananjalo, iarhente ezilawulwayo ezinje nge-eToro zikunika umnatha wokhuseleko.
Iimpawu zethu zesitokhwe zihlala zijolise kurhwebo lwexeshana elifutshane kunye nokufumana inzuzo encinci - rhoqo. Kananjalo, kuya kufuneka ujonge umthengisi wesitokhwe kwi-Intanethi onokukunika ukusasazeka okuqinileyo kunye namaxabiso ekhomishini asezantsi okuthengisa.
Ukuba ijaji isaphumile ukuba yeyiphi eyona nto inokuba yeyona broker ilungileyo yeempawu zesitokhwe kuwe, ke unokuba nomdla kwi-eToro. Njengoko besesitshilo apha ngasentla, umrhwebi unelayisensi epheleleyo kwaye ulawulwa. Kwaye-iqonga lokuthengisa kwezentlalo likwenza ukuba urhwebe amasheya ngaphandle kokuhlawula isenti kwimirhumo yekhomishini. Oku kuthetha ukuba kuphela komrhumo omele ucinge ngawo kukusasazeka.
Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lwakho alunamtsalane njengoko ungathanda, ungakhathazeki. Uninzi lwamalungu ethu lusebenzisa imiqondiso yethu yesitokhwe kwaye basebenzise amandla ngokusebenzisa umthengisi okwi-Intanethi ukukhulisa izikhundla zabo.
Umrhwebi ophezulu, i-eToro ibonelela ngendawo yokuthengisa isitokhwe ukuya kuthi ga kwi-1: 5 ukuba uhlala e-UK okanye eYurophu. Ukuba uhlala kwenye indawo, unokukwazi ukufikelela ku-1: 20.
Kananjalo, inani lokuphakanyiswa ekunikezelweni aliyi kuxhomekeka kuphela kwinto oyithengisayo, kodwa nalapho uhlala khona. Ezinye iintlanga zifakwe kwisixa semali esinokubonelelwa ngumrhwebi, ngelixa abanye banokufikelela kangangoko banqwenela.
Ngalo lonke ixesha qiniseka ukuba uyazi ngokupheleleyo ukuba zeziphi iimarike zokuthengisa ezinokuthi zikunike zona. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ufumana umqondiso wokubeka iodolo kwistokhwe sase-UK-kuya kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi unikezela ukufikelela kule ndawo yentengiso. Ngaphandle koko, lithuba elichithwe ngumqondiso wesitokhwe.
I-eToro, umzekelo, ibonelela ngokufikelela kwi-2,400 + esitokhwe ezahlukeneyo ezivela kwiindawo ezahlukeneyo zentengiso zehlabathi. Kananjalo, amathuba okuba umrhwebi okwi-intanethi angabinakho ukufikelela kwesinye sezitokhwe eziboniswe kwisignali yethu yesitokhwe akunakulindeleka.
Enye i-metric ekufuneka uyiqwalasele kukuba ingaba iqonga lokuthengisa isitokhwe lamkela uluhlu lweentlobo zentlawulo. Abanye abathengisi bemveli abakwi-Intanethi bavumela kuphela abathengi ukuba bafake imali besebenzisa ugqithiso lwebhanki- olunokulibazisa uhambo lwakho lwesiginali ukuya kuthi ga evekini.
I-eToro yamkela yonke into ukusuka kumakhadi etyala kunye neebhanki ukuya kutshintshelo lwebhanki, kunye ne-e-wallets ezinjengePayPal, iSkrill, iNeteller, nokunye - kuxhomekeke kwindawo ohlala kuyo.
Uyisebenzisa kanjani eyona miqondiso mihle yamasheya-inyathelo ngenyathelo lokuhamba
Okwangoku unokuba uziva uzithembile ngokwaneleyo ukuba ungaya kwaye woyise iimarike zentengiso - usebenzisa imiqondiso yethu ukukukhokela.
Ngale nto engqondweni, siqulunqe inyathelo eli-5 lokuhamba ngendlela yokusebenzisa ezona mpawu zibalaseleyo zesitokhwe apha kwi-Learn 2 Trade!
Inyathelo 1: Joyina i-2 yoRhwebo
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukubhalisela i-Learn 2 Trade. Le yinkqubo ekhawulezayo nelula yokwenza ibhola iqengqeleke. Ukuze sikwazi ukufikelela kwiqela lethu labucala lesiginali yesitokhwe- kuya kufuneka uhlawule umrhumo wethu wenyanga we- $ 15. Ungalibali, oku kuza nesiqinisekiso sembuyekezo seentsuku ezingama-30- akukho mibuzo ibuziweyo.
Inyathelo 2: Joyina iQela leeMpawu zeStock zeTelegram
Ngoku unokuzibandakanya neempawu zethu zesitokhwe Iqela leTelegram ukuqala ukufumana iingcebiso ezi-3 zokuthengisa ngeveki.
Ukwenza oku, kuya kufuneka ukhuphele iTelegram kwifowuni yakho (ukuba awukabikho). Okulandelayo, uya kufumana imiyalelo epheleleyo yendlela oqhubeka ngayo.
Inyathelo 3: Vula izilumkiso zesiko
Njengoko besitshilo ngaphambilana, ungenza ngokwezifiso izaziso zakho zeTelegram. Kananjalo, kububulumko ukuqinisekisa ukuba imiyalezo yokwazisa iphakamile ukuze ungaphoswa ngumqondiso wesitokhwe ngexesha langempela.
Unokwenza oku ngqo kwiqela leTelegram yoRhwebo lokuFunda 2. Oku kuqinisekisa ukuba xa isaziso esithile sikhala, uyazi ukuba ufumene umqondiso wesitokhwe ofuna ukuwujonga.
Inyathelo 4: Fumanisa iiMpawu zeSitokhwe kunye neeOda zeeNdawo
Njengoko besesitshilo, imiyalezo yeTelegram iza ngexesha langempela. Kananjalo, xa sithumela imiqondiso yesitokhwe- uya kwaziswa ngoko nangoko kwithuba elinokuba nenzuzo.
Ukuphinda, yonke imiqondiso yesitokhwe ibandakanya igama lesitokhwe nokuba sihambe ixesha elide okanye elifutshane. Sikwabandakanya umda, ukulahleka kokuyeka, kunye nexabiso lokuthatha inzuzo.
Inyathelo 5: Hlaziya iSignal Signal
Nje ukuba uhlolisise umqondiso wesitokhwe, yiya kwi broker oyikhethileyo kwi-intanethi kwaye ubeke iiodolo ezicetyisiweyo. Nje ukuba ubethe uqinisekise iodolo, iqonga liya kwenza iodolo yakho.
Ukuphinda wenze kwakhona, emva kokubeka izikhundla zakho, ukulahleka kwakho kokuyeka kunye nemiyalelo yokuthatha inzuzo iya kwenziwa ngokuzenzekelayo xa / xa ixabiso elithile lifikelelwe.
Ukuba urhwebo lwesitokhwe lube yimpumelelo, inzuzo yakho evela kurhwebo iya kongezwa ngokuzenzekelayo kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Eyona miBoniso yeStock: Isigqibo
Olona phawu lubalaseleyo lwesitokhwe lukunceda ekubambiseni amathuba okurhweba anokubanengeniso- ayinamsebenzi kwinqanaba lakho lamava okuthengisa isitokhwe.
Apha ekuFundeni u-2 wezoRhwebo, iqela lethu leengcali zentengiso yezindlu zangaphakathi zihlala zibandakanya zombini isicwangciso sokungena kunye nesicwangciso sokuphuma kuwo wonke umqondiso. Oku kubandakanya igama lesitokhwe, nokuba kukuthenga okanye ukuthengisa, ukunciphisa umda, kunye nokuyeka-ukulahleka kunye namaxabiso athatha inzuzo.
Ngapha koko, ukuba awuzithandi iimpawu zesitokhwe esizibonelelayo, ungasoloko ubuya umva kwiintsuku ezingama-30 zokubuyisa imali. Nxibelelana nje neqela lethu lenkxaso yabathengi malunga nokucinywa kunye nokubuyiselwa imali.
Ixabisa malini imiqondiso yesitokhwe?
Apha kuFunda u-2 woRhwebo, sithumela imiqondiso esemgangathweni emi-3 yesitokhwe ngeveki kumalungu eqela leTelegram. Le yeyentlawulo yenyanga ye- $ 15 nje.
Ndenza ntoni ngophawu lwestokhwe?
Umqondiso ngamnye wesitokhwe seRhwebo 2 uya kubandakanya onke amalungu omyalelo wakho. Umzekelo, umqondiso uya kukuxelela ukuba yeyiphi na into ekufuneka urhwebe kuyo, nokuba uza kuhamba ixesha elide okanye elifutshane kunye nokuba leliphi ixabiso lokufaka i-stop-loss kunye ne-order-profit order. Yiya nje kumthengisi wempahla owaziwayo kunye nolawulwayo njenge-eToro kwaye ubeke iiodolo zethu ezicetyisiweyo. I-eToro iya kuqhuba umda wakho, ukulahleka kokuyeka, kunye neodolo zenzuzo njengoko kwaye uyalelwe. Ngale nto engqondweni, iimpawu zethu zesitokhwe zinqumle isidingo sexesha kwiimarike kunye nezikhundla zokuvala ngesandla.
Ngaba ndiza kwenza imali ngeempawu zesitokhwe?
Ngelixa singathanda ukuqinisekisa umqondiso ophumeleleyo ngalo lonke ixesha, ayisiyiyo indlela esebenza ngayo intengiso yesitokhwe. Akukho bhola yekristale. Nangona kunjalo, sizithembile kuphando lwethu kunye novavanyo olunzulu oluxhaswe ngumqondiso ukuba sinikezela onke amalungu ENTSHA isiqinisekiso sokubuyisa imali seentsuku ezingama-30.